Internet-ka K/Soomaaliya oo dib loo xirayo Axadda soo socota. | puntlandi.com
Internet-ka K/Soomaaliya oo dib loo xirayo Axadda soo socota.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in khadkii go’ay ee internet-ka dib loo xirayo todobaadka soo aaddan.
Wasiirka Wasaaradda Boostada iyo isgaarsiinta Dowladda Federaalka Soomaaliya Cabdi Canshuur ayaa sheegay in uu haatan diyaaryahay markabkii dib u xiri lahaa fiiladii go’day ee Fibre Optic-ka,kaasi oo maalintii arbacada soo gaaray halka fiilada laga xirayo.
Canshuur ayaa sheegay in maalinta berri ay bilaaban doonto hawsha cillad-bixinta internet-ka,wuxuuna intaasi raaciyey in maalinta Axadda ah ee soo socota ay ku hanweyn yihiin in gebi ahaanba la cillad-bixiyo internet-ka xawaaraha dheer ee laga isticmalo K/Somalia,islamarkaana uu khadku ku soo laabto sidiisi hore.
Dhanka kale wuxuu ka hadlay warar sheegayey in Khadka loo jartay arrimo la xiriira deyn lagu leeyahay shirkadaha isgaarsiinta dalka,wuxuuna wararkaasi ku tilmaamay”kuwo been abuur ah”,isagoo caddeeyey in markab lagu tuhunsan yahay in uu jiiray fiilada uu haatan weli ku sugan yahay aaggii.
Maqnaanshaha internetka ee K/Somaliya ayaa saamayn weyn ku yeeshay dhaqaalaha dalka oo awalba baaxaa-deyay,waxana dowladda Soomaaliya sheegtay in dalku maalin walba khasarayo $10 malyan oo Dollar inta khadkaasi go’anayahy.